Aesthetic Medicine – အလှအပဆိုင်ရာဆေးပညာ | Singapore Personalized Patient Care
Botox is FDA-approved since 2002 for the cosmetic treatment of wrinkles or expression lines. It is the most popular cosmetic treatment in the USA, which is used to reduce wrinkles found around the eyes, between the brows and on the forehead. It can also be used for facial contouring by reducing the size of the jaw muscles and even createaBotox lift for the face and eyelids. Meso-botox can also be used to achieveamatt look on the face for patients with oily skin. Results can last from3to 8 months. Beyond cosmetic uses, Botox is also used for medical treatment of migraine, neck spasm and excess armpit sweating.﻿
Botox is injected viaafine insulin syringe into the muscles that cause wrinkles or into muscles that are prominent which result inasquare jaw line. Topical anesthesia (numbing cream) will be applied 30 minutes prior to treatment to minimise discomfort during the treatment.
Patients are advised to remain upright for the next4hours. A cold compress may be applied to the injection sites to reduce any swelling, bruising or pain. Patient may occasionally experience slight bruising or pain at the injection sites. The injected areas may feel fatigued or weak for the next 1 week. The full effects of the treatment may only be seen from the 7th to 10th day. For contouring procedures, the full results may only be seen from the 3rd to 4th week. Patients may opt for top-up of Botox2months after first treatment if they wish for more prominent results. Lifestyle changes are advised. Patients are advised to refrain from frequent chewing of hard foods to prevent jaw muscles from getting prominent. Patients are also advised to frown lesser to prevent the reforming of glabellar (area between the eyebrows) wrinkles.
Chemical peel is one of the most commonly performed aesthetic treatments. Different concentrations of glycolic acids are applied to the skin to chemically remove the upper layers of blemished skin. It is used smoothen and improve the texture of facial skin. Acne scars and skin pigmentation can be much reduced and skin looks brighter and clearer after treatment. Chemical peel can also reduce fine wrinkles. It is the safest and most effective on the face.
The skin is thoroughly cleansed. The appropriate concentration of glycolic acid will be applied on the face depending on patient’s skin condition. A cold pack will be provided during the treatment should any burning or stinging sensation occur.
မြန်မာဘိုတော့စ် သည် မျက်နှာအရေးအကြောင်းများ၊ အရေပြားတွန့်ခြင်း စသည်တို့အတွက် အသုံးပြုရန် 2002 ခုနှစ်ကတည်းက FDA မှ လက်ခံခွင့်ပြုထားသော ဆေးဖြစ်သည်။ ယင်းဆေးကို အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် အလှအပအတွက် ကုသရာတွင် အလွန်အသုံးများသည်။ အများဆုံးအသုံးပြု လေ့ရှိသော နေရာများမှာ မျက်စေ့တစ်ဝိုက်၊ မျက်ခုံးနှစ်ခုကြား၊ နဖူး၊ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ထိုဆေးကို မျက်နှာ ပုံဖော်ရာတွင်လည်း အသုံးပြုကြသည်။ မေးစေ့နားရှိ ကြွက်သားကို သေးငယ်အောင်လုပ်ပြီး မျက်နှာနှင့် မျက်ခွံများကို မြှင့်တင်ပေးရန်လည်း သုံးကြသည်။ မျက်နှာအဆီပြန်ခြင်းအတွက် Meso-botox အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဆေးအာနိသင်သည် ၃-လမှ ၈-လအထိခံသည်။ အလှအပအတွက် အသုံးပြုခြင်းအပြင် ဘိုတော့စ်ကို ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ဝေဒနာ၊ လည်ပင်းနာကျင်ခြင်းနှင့် ချိုင်းချွေးအလွန်အမင်းထွက်ခြင်း တို့ကို ကုသရာတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဓါတုဆေးဖြင့် အရေပြားကို ချောမွေ့အောင်လုပ်ခြင်း
ဓါတုဆေးဖြင့် အရေပြားကို ချောမွေ့အောင်လုပ်ခြင်းသည် ယခုအခါ လူသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်။ ပြင်းအား အမျိုးမျိုးရှိသော ဂလိုက်ကိုးလစ်အက်စစ်ကို အရေပြားပေါ်တွင်လိမ်းပြီး အစက်အပြောက်များ ရှိနေသော /မဲနေသော အရေပြား အပေါ်ယံ အလွှာကို ဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မျက်နှာအရေပြားကို ပိုမို ချောမွှေ့လာစေပြီး တင်းတင်းရင်းရင်း ဖြစ်လာစေပါသည်။ ၀က်ခြံအမာရွတ်များနှင့် တင်းတိပ်၊မှဲ့ခြောက်၊ အမဲစက်များကို ကောင်းစွာ လျော့ပါးသွားစေပြီး မျက်နှာကို ပိုမိုတောက်ပ ရှင်းလင်းလာစေပါသည်။ ယခုနည်းဖြင့် ကုသခြင်းဖြင့် သေးငယ်သော အရေပြားတွန့်ခြင်းကိုလည်း လျော့စေပါသည်။ ယခုနည်းသည် မျက်နှာအတွက် စိတ်ချရပြီး အလွန်ထိရောက်သည်။
အရေပြားကို သေသေချာချာသန့်ရှင်းလိုက်ပါသည်။ ထို့နောက် အရေပြားအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး သင့်လျော်သော ပြင်းအားရှိသည့် ဂလိုက်ကောလစ်အက်စစ်ကို မျက်နှာပေါ်တွင် လိမ်းပါသည်။ အနည်းငယ်လောင်သလို ခံစားရပါက Cold pack ကို ကုသနေစဉ်အတွင်း ကပ်ပေးပါသည်။
စစချင်း လောင်သလို၊ စပ်သလို ခံစားရခြင်း ပျောက်သွားပြီးတဲ့အခါ သင့်ရဲ့အရေပြားဟာ နည်းနည်းတင်းသလို ခံစားရပါမယ်။ အရေပြားကွဲအက်ခြင်း မဖြစ်စေရန်အတွက် Quick recovery cream ကို တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်လိမ်းပါ။ ဆပ်ပြာမသုံးပါနှင့်အုံး။ ၅-ရက်မှ ၇-ရက်ကြာသောအခါ အပေါ်ယံအလွှာသည် စတင်ကွာကျလာပါလိမ့်မည်။ ကွာကျလာသောအရေပြားကို သူ့အလိုအလျောက်ကွာကျပါစေ။ အတင်းမခွာရ။ တစ်ခါတစ်ရံ နောက်နှစ်ပါတ်ခန့်ကြာချိန်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ကွာကျခြင်း ထပ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။